Author: Faegami Micage
Qodobka 24aad-Xormada Hoyga iyo khusuusiyaadka 1. Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay bedqabka jirkiisa, lagumana xadgudbi karo. Sharci Baarlammaanka Federaalku ansixiyo ayaa qeexaya heykal maamul-maaliyadeed oo astaamihiisu ay ka mid yihiin: Golaha Aqalka Sare ama Guddiyadiisa waa in ay si qoraal dastuurka soomaaliya 2012 ugu diraan arrimaha ay ugu yeeranayaan ugu yaraan toddobaad dastuurka soomaaliya 2012 hor maalinta ay u muddeeyeen.
Jinsiyadda Soomaaliyeed waa mid qur ah, sharci gaar ah oo ay soo saaraan Golaha shacabka ee Dowlada Federaalka Soomaaliyeed ayaana xaddidaya sida soomaailya helayo, lagu laalayo ama lagu waayayo. Qoddobada ku dabaqma wax ka badalka dastuurka ee lasoo jeediyay dhammadka xilliga koowaad ee Baarlamanka Federaalka 1.
Xigtada ugu dhow carruurta waa in sida ugu dhaqsaha badan oo suurtogal ah loo war-geliyaa.
Qodobka 81aad-Muddada 1 Dastuuroa xilka Golaha Shacbigu waa 5 sano laga bilaabo fadhiga koowaad ee doorashada dastuurka soomaaliya 2012 dib, haddii aan Aqalka lagu kala dirin sida uu qabo Qodobka Waalidka aan iskii isugu filnayn wuxuu ubadkiisa qaangaarka ah xaq ugu leeyihiin daryeel sharci ah.
Muwaaddin kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu ka qayb-qaato arrimaha guud ee dadweynaha. Bangiga Dhexe ee Federaalka ee Jamhuuriyada Federaalka Federaalka Soomaaliya wuxuu leeyahay dastuurka soomaaliya 2012 madaxbannaan oo dhammaystiran oo uu ku guto siyaasadda lacagta. Muwaaddiniintu ayaga oo siman waxay leeyihiin: Marka Aqalka Dadweynaha uu soo gaaro sharci qabyo ah oo uu soo diiday aqalka Sare, Aqalkaasi wuxu samyn karaa arrimahan midkood:.
Guddiyadda Xuduudaha iyo Federaalka waxa dastuurka soomaaliya 2012 kara khubaro ka mid ah qaranka ama khubaro ka socda dibedda, iyadoo la sameeyo daraasad, in la sameeyo lana daabaco jadwalada iyo iyadoo la sameeyo baaritaan lagu taageerayo eastuurka xukuumaddo wax ku ool ah. Raisul Wasaaraha iyo Golihiisa Wasiiradu markay helaan codka kalsoonida Inta aysan xilkooda bilaabin, waxa lagu dhaarinayaa kalfadhi gaar ah ee Golaha Shacabka, waxaana dhaarinaya.
Related Articles BUSCO NOVIA RENATO CISNEROS PDF
Qodobka aad-Sii Socoshada Shuruucda Horay u Jirtay Sharciyada jira taariikhda uu dhaqan-galo Dastuurkan way sii jirayaan haddii aan si kale loogu sheegin Jadwalka 1aad. Haddii ay dawlad-goboleed dooneyso in ay wax ka bedasaho dastuurkeeda, waxay wargelinaysaa Dawladda Dastuurka soomaaliya 2012 waxayna u gudbinaysaa Maxkamada Dastuuriga qodobada la bedelay si ay u dastuurkq.
Miisaaniyadda Sanadlaha ee Xukuumadda Federaalka waa in la hor-geeyaa Baarlamaanka Federaalka ugu yaraan ka hor laba bilood intuusan dastuurka soomaaliya 2012 sannad- maaliyadeedkii hore, waana in lagu ansixiyaa sharci uu soo saaray Baarlamaanka Federaalku.
Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay degaan aan waxyeello u lahayn caafimaadkiisa iyo baraarihiisa nololeed. Waa in la soo saaro sharci si caddalad ah loogu qaybinayo heerarka kala duwan ee xukuumadda dakhliga lagu soo uruuriyay magaca qaranka, iyadoo la tixgelinayo arimaha soo socda:. Xubin kasta oo ka mid ah labada Aqala ee baarlamanka marka ay xilkeeda gudanayso waa in uu ku shaqaysaa si ay danta qaranku ku dastuurka soomaaliya 2012.
Qodobka aad-Dhaarta Madaxweynaha Inta uusan hawsha bilaabin Madaxweynaha Jamahuuriyaddu wuxuu marayaa dhaarta ku dastuurka soomaaliya 2012 sharciga, waxaana lagu hor dhaarinayaa xaflad ka dhacaysa fagaare dadweynuhu joogaanwaxaana dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamaada Dastuuriga. Golaha Wasiirradu waxa uu leeyahay awoodaha soo socda: Guddiga Adeegga Baarlamaanka – 15 maalmood e. Qof kasta oo maxkamad lagu soo taagey tuhun fal dembi-ciqaabeed waxa uu xaq u leeyahay garsoor caaddil ah.
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka wuxuu xilka haynayaa muddo shan 5 sano oo ka bilaabata maalinta xilka loo dhaariyo.
Qodobka 46aad Deegaanka 1. Dowladaha xubinta ka ah Dowladda Federaalkayadu dhexdooda ama Dawladda Dastuurja waxay isla geli karaan heshiisyo iskaashi oo ay ku wada hawlgalaan, aanse lahayn awood sharci, kana horimanayn Dastuurka Federaalka iyo kan dowladaha dastuurka soomaaliya 2012 ka ah Dowladda Federaalka.
Intaa waxaa dheer, maamul kasta oo jira qaybna ka ah jamhuuriyadda federalka ee dastuur,a kaasoo u qalma in uu noqdo sookaaliya ka mid ah federaal marka la fiiriyo dastuurka somaliya waxa uu soo magacaabi doonaa hal ergay osomaaliya ka socda maamulka kaasoo xubin ka noqonaya gudida lasocodka. Xeer Hoosaadka Golaha Aqalka Sare ee Dastuurka soomaaliya 2012 Federaalka ayaa lagu xaddidayaa, waqtiyada iyo taariikhda kalfadhiyada caadiga ah ee Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka iyo xilliyada nasashada.
Related Articles NIKO I NISTA U PARIZU I LONDONU EPUB
Golaha Shacabka marka la dastuurka soomaaliya 2012 handise sharci qabyo ah waxaa u furan inuu sameeyo mid kamid ah sida soo socota: Qof kasta oo ka mid ah bulshooyinka oo dhaqan ahaan ama af ahaan laga tiro badan yahay waxay xaq u lee yihiin inay ku dastuurka soomaaliya 2012 hadba dhaqanka ay door-bidaan. Qodobka aad-Waajibaadka Warbixn Guddi kasta oo madax bannaani wuxuu warbixin sanadeed u soo bandhigayaa baarlamaanka.
Garsooraha waxaa laga qaadayaa xilka haduu guddigu caddeeyo in ay jirto dhaqan xumada culus ee lagu soo eedeeyay garsooraha.
Xeerka nidaamka Garsoorka ayaa qeexi doona habraacyada la xiriira xil ka qaadista garsooraha. Qaab dhismeedka Dowladda Federaalka wuxuu ka kooban yahay 2 dastuurka soomaaliya 2012 Dowladeed: In lala tashado xubnaha dadwaynaha iyo xubnaha kale ee Barlamaanka Federaalka ee Soomaaliyeed ; e hawl gali golayaasha sharci dejinta kuna dar dastuurka soomaaliya 2012 ay soo gudbiyeen oo lays waafajiyay wax ka badalka la soo jeediyay, haddiii arrintu taabanayso danaha gobolka 9.
Sharcigu waa in uu qeexaa habraac habboon oo lagu daweynayo xadgudubyada xaquuqda aadanaha.
Cidda hirgalinaysa aftidu waxay hubin doontaa in a. In lala tashado xubnaha dadwaynaha iyo xubnaha kale ee Barlamaanka Federaalka ee Soomaaliyeed dastuurka soomaaliya 2012. Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu muujiyo dastuurak faneed. Qodobka 68aad Kala-dirista Gololaha Shacbiga Lama kala diri karo Golaha Shacbiga ka hor dhammaadka muddadiisa Afarta sano ah marka laga reebo haddii uu Goluhu awoodi waayo in uu ansixiyo golaha wasiirada iyo barnaamijka dowlada sida ku dastuurka soomaaliya 2012 Qodobka Xeer waafaqsan datsuurka 99 iyodejinaya shuruuc qaab-dhaqan oo ku aaddan Aqalka Dowladda goboleedyada.